भादगाउँ – विशेषगरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले धुमधामका साथ १ महिना मनाउने गुँलापर्व शुक्रवारदेखि शुरु भएको छ ।
पर्व नेपाल संवत्को गुँलाथ्व पारुदेखि ञलाथ्व पारुसम्म १ महिना मनाइने गर्दछन् । यो पर्वको अवसरमा यस वर्ष मध्यपुरथिमिमा दुर्लभ मानिने न्याकुबाजा प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
विशेषगरी जंगली अर्ना भैंसीको सिङबाट तयार गरिने यो बाजा थिमिमा करीब २ दशकपछि प्रयोगमा ल्याएको हो । यसका साथै यस वर्ष चतीबाजा (भेंडाको सिङबाट बनेको बाजा) समेत प्रयोगमा ल्याइने सञ्चारकर्मी समेत रहेका मध्यपुरथिमिका स्थानीय केके मानन्धरले बताए ।
‘यस वर्षको गुँलापर्वमा चती, न्याकुलगायतका मौलिक बाजासहित धाःबाजा, भुस्याः, धिमे लगायतका बाजागाजाका साथ गुँलापर्व मनाउने तयारी छ,’ उनले भने । मध्यपुरथिमिमा गुँलापर्वको अवसरमा नगरका बहाः, बही, चैत्यलगायत विभिन्न मठमन्दिरको परिक्रमा गर्ने प्रचलन रहेको छ । काभ्रेको नमोबुद्ध, काठमाडौंस्थित स्वयम्भू महाचैत्य र बौद्ध स्तूप, साँखुको बज्रयोगिनी तथा कीर्तिपुरको चोभारस्थित आदिनाथको समेत दर्शन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
यस वर्ष गुँलापर्वको अवसरमा मध्यपुरथिमिमा वाचुनानीबाट गुँलाबाजा निकालिने भएको छ । मध्यपुरथिमि–५ स्थित वाचुनानीका स्थानीयवासीले मध्यपुर गुँलाबाजा व्यवस्थापन समिति गठन गरी गुँलाबाजा निकालेको हो । समितिका अनुसार यस वर्ष साउन २० गते नागपञ्चमीको दिन चाँगुनारायण, साउन ३० गते जनै पूर्णिमाको दिन ललितपुर कुम्भेश्वर, कृष्ण मन्दिर र बालकुमारी मन्दिर, साउन ३१ गते शुक्रबार गाईजात्राको दिन मध्यपुरथिमि नगरपरिक्रमा, भदौ ६ गते कृष्णाष्टमीको दिन काठमाडौंको स्वयम्भू, विजेश्वरी, शोभा भगवती, इन्द्रायणी, महाँकाल, भदौ ११ गते जुह्रेचह्रेको दिन सूर्य्विनायक गणेश मन्दिर र भक्तपुर नगरपरिक्रमा, भदौ १४ गते बुङ्गमती, कार्यविनायक, खोकना, चोभार परिक्रमा गरिने छ ।
रोचक प्रसंग : महाभारत युद्धमा हजारौं मारिए, तर कस...
योगेन्द्र पण्डित : पृथक मूर्तिकार, संग्रहालय बनाउने ...
अझै पर्छ पानी ? यसो भन्छन् मौसमविद्
सम्बोधनका क्रममा मोदीले नेपालीमा भने– 'कस्तो छ ?'
भिडियो प्रविधिमार्फत ओली र मोदीले गरे इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको संयुक्त उद्घाटन